Ingqikithi Yengonyama: Isitayela se-Mac OS Kusuka kuLinux
I-Elementary Lion Theme: Isitayela se-Mac OS
Ngithanda kakhulu ukuvela kwe- Lion, inguqulo yakamuva ye Isistimu yokusebenza de Apple futhi yize sinakho IMac4Lin ukufeza lokho I-Gnome ifana naleyo yabafana baseCupertino, nginethulela ingqikithi ukuze nayo izuze leyo njongo.
Ingqikithi Yengonyama njengoba igama layo likhombisa, iyitimu eguquliwe ye- I-Nautilus Elementary futhi singayilanda kusuka kufayela le- iwebhusayithi yombhali en Deviantart. Njengenothi elengeziwe kufanele ngisho ukuthi isihloko I-Metacity ihlangana ngokumangalisayo ne- I-Mint-X, isihloko IGtk okuzenzakalelayo kwe- I-LMDE.
Izixhumanisi: Landa i-Elementary Lion (8 Mb)
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » I-Elementary Lion Theme: Isitayela se-Mac OS
Kuhle kakhulu, kepha angazi ukuthi ngiyifaka kanjani ku-Debian 7 .. kukhona isifundo?
Ngingabaza kakhulu ukuthi izosebenza ku-Debian 7 njengoba kubonakala kimi ukuthi akuyona itimu yeGNOME Shell.
Sawubona, umnikelo omuhle kakhulu, kepha ngiwufaka kanjani ku-Elementary OS?
ImgLikeOpera: Phatha ukuthi imiphi imithwalo yeFirefox
Ungawafaka kanjani amadivayisi e-USB ne-CDROM ku-PCMan ngomsebenzisi wethu